ဆေးရုံမှ ဆင်းကာ အိမ်ဖြူတော် ပြန်ရောက်လာပီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် – Shwe Naung
ဆေးရုံမှ ဆင်းကာ အိမ်ဖြူတော် ပြန်ရောက်လာပီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်
Shwe Thuta | October 6, 2020 | World News | No Comments
COVID-19 ရော ဂါ ကုသ မှုခံယူနေတဲ့ အမေ ရိကန် သမ္မတ ဒေါ်န ယ်ထရန့်ဟာ တနင်္လာနေ့(အောက်တိုဘာ ၅) က ဆေးရုံမှ ဆင်းပြီး ရဟတ်ယာ ဉ်နဲ့ အိမ်ဖြူတော်ကို ပြန်လည်ရော က်ရှိလာကြောင်း သိရပါတယ်။ မဲဆွယ်စည်း ရုံးပွဲတွေ မကြာခင် ပြန်လုပ်သွားမယ်လို့ ဆေးရုံက မဆင်းခင်ေ လးမှာ ထရန့်က တွစ်တာပေါ်ေ ရးတင်ခဲ့ပြီး သတင်းတုေ တွက စစ်တမ်းအတုတွေပဲ ထွက်ေ ပါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အဖြူရောင် နှာခေါ င်းစည်းတစ်ခုကို ဝတ်ဆင် ထားတဲ့ ထရန့်ဟာ လက်သီးဆုပ်၊ လက်မေ ထာင်ပြရင်း ဝါရှင်တန် အပြင်ဘက်ရှိ Walter Reed Medical Center ဆေးရုံ လှေကားကနေ ဆင်း လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ဖြူတော်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရသူ ဘယ်လောက်ေ လာက်ရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့ သတင်းထော က်တစ်ဦးရဲ့ အမေးကိုတော့ “ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်” လို့ပဲ သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ဖြူေ တာ်အရောက် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်က အဆင်းမှာလည်း သတင်းထောက်တွေကို သူက လက်မထောင်၊ လက်ဝှေ့ယမ်း နှုတ်ဆ က်ကာ အိမ်ဖြူတော်ဆီ လမ်းလျှောက်ဝင်ေ ရာက်သွား ခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ရွေးကောက် ပွဲမှာ ပြန်လည် ရွေးကောက်ခံရ ဖို့အတွက် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတလောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင်နဲ့ အပြိုင်နွှဲရမယ့် ရီပတ်ဘလီ ကန် သမ္မတဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ ရတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့မှာ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ ညနေပိုင်းမှာ ဆေးရုံက ဆင်းတော့ မှာဖြစ်တယ်လို့ တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ထရန့်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
“တကယ်ကော င်းမွန်နေတယ်လို့ ခံစားရ ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကို မကြောက်ပါနဲ့၊ ခင်ဗျားတို့ဘဝ ကို အစိုးမိုးမခံပါနဲ့၊ ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ လက်ထက်မှာ ကော င်းမွန်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်ချို့နဲ့ အသိပညာတွေ ကျွန်တော်တို့ဖ န်တီး ထားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။” လို့ သူက တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သေဆုံးသူ ၁ သန်းကျော်နေပြီဖြစ်ပြီး အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံတ ည်းမှာပဲ သေဆုံးသူ ၂၀၉၀၀၀ ကျော်ရှိနေကာ ဒီအရေအတွက်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အမြင့်ဆုံး သေဆုံးမှု အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာတွေ အတွက် အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံ (ကိုဗစ်ပျောက်ကင်းသွား သူတွေ မှာ သေဆုံးနိုင် တဲ့ ပြင်းထန်မှိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ ဟုဆို)
ကိုယ်အမြဲနေနေတဲ့ အိမ်နောက်ဖေး ပန်းခြံ ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းသတ္တဝါ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
No Comments | Dec 19, 2020
အမှန်တကယ် လက်တွေ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ကတ်ထူပြားယာဉ် တွေကို တီထွင်ဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်စု (ရုပ်သံ)
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်ကြာအောင် ပေါင်းသင်းပြီးမှ ဇနီးဖြစ်သူဟာ မိန်းမအစစ်မ ဟုတ်ကြောင်း သိလိုက်ရသူ
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် အိန်ဂျယ်ကိုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မိုးပွင့်ဖြူရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ ‌နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
နေပြည်တော်မှာ ညစာစားပွဲတွေ ကျင်းပပီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ခန့်စည်သူ၊စိုးသူနဲ့စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ ဗီဒီယိုလေး……..
Copyright © 2021 Shwe Naung .